Isaladi yeetapile kunye nesalmon, iapile kunye netshizi | Ukupheka kweKhitshi
UMaria vazquez | 06/05/2021 09:30 | Ukuhlaziywa ukuba 06/05/2021 13:30 | Isaladi
Cuisine yethu iyatshintsha njengokuba amaxesha etshintsha. Kwaye sonwabele amaqondo obushushu amnandi njengoko sinjalo, zokupheka zasehlotyeni njengale isaladi yeetapile kunye nesalmon, iapile kunye netshizi etyakatyiweyo ime njengenye indlela elungileyo. Enye indlela ehlaziyayo yosapho lonke!
Iisaladi zeetapile zilula kakhulu ukuzilungiselela. Ukuba sibona kancinci kwaye sipheke iitapile kwangaphambili, ukongeza, akukho nto iya kusithintela ekwenzeni izicwangciso kusasa kwaye sizonwabele. Kwaye xa sifika ekhaya, kufuneka sikhathalele ukusika nokuxuba. Ukupheka ehlotyeni kulula kakhulu, ngakumbi ngeendlela zokupheka ezilula njengalezo Inkosazana amandine.
Ngaba ufuna iqhinga lokwenza esi sidlo ngokukhawuleza? Kuya kufuneka ulandele ekhondweni logxa wam uMontse ukupheka iitapile kwimicrowave. A iqhinga elifanelekileyo labangaboni kakuhle Oko kuyakukhuthaza ukuba ufumane okuninzi kwesi sixhobo. Kwaye ucoceke kakhulu, kuba uya kuyidinga isitya kuphela.
Ingaba yenza iiyantlukwano ezahlukeneyo Kule saladi ukuyilungelelanisa kokubini kwizinto ozithandayo nakwi-pantry yakho. Unokufaka i-salmon yokutshaya i-salmon entsha, ngaloo ndlela ungeze inani elikhulu leprotheni kwisitya, okanye ukunambitha ushizi otyutywe ngeziqholo ezahlukeneyo ezifana ne-thyme okanye i-coriander. Nditsho nokufaka itshizi etyhidiweyo yokupheka cream okhanyayo, iyogathi yamaGrike okanye iyoghurt yendalo xa ufuna ukhetho olulula. Ayizukubakho ngamathuba!
2 Ukubaluleka kwezithako ezifanelekileyo
Isaladi yeetapile kunye nesalmon etshayiweyo, iapile kunye nokunxitywa kwesonka samasi esicebisa ukuba namhlanje kufanelekile ukugqibezela iimenyu zakho ehlotyeni.
2 iitapile ezinkulu ze-Princess Amandine
Iisilayi ezi-3 zesalmon yokutshaya
1 iglasi yetshizi etyutywe
I-sprig yerosemary entsha
Sibeka amanzi amaninzi anetyiwa embizeni kwaye pheka iitapile imizuzu engama-20.
Emva kwemizuzu engama-20 sijonga ukuba zenziwe kwaye zisuswe emanzini ukupholisa. Nje ukuba kubande uxobule uze usike iziqwenga.
Emva koko, sidibanisa iitapile kwisitya kunye nesalmon ecoliweyo kunye neeapile ezisikiweyo. Gcina ukhumbula ukuba iapile inokuyidibanisa ukuba uyilungiselela kwangaphambili, ke kungcono ukuyongeza kumzuzu wokugqibela.
Kwelinye icala, kwindebe sidibanisa itshizi ebethiweyo kunye nemon, irosemary esandul 'ukucolwa, intwana yetyuwa kunye nenye ipepile.
Sikhonza isaladi yeetapile zeasalmon enxitywa ngeshizi.
Xa sicinga ngehlobo, ukukhanya, iiresiphi ezintsha ezinencasa yesitrasi ziza engqondweni. Iiresiphi ezinje ngale saladi yeetapile eziza kukubonelela ngesixa esikhulu seecarbohydrate kunye neprotein esemgangathweni yebhayoloji ngenxa yesithako sayo esiphambili, ukutya okunamafutha asezantsi. Ngaba unesibindi sokuyilungiselela?
Ukubaluleka kwezithako ezifanelekileyo
Kuqhelekile ukucinga ukuba kulula ukwenza olu hlobo lweresiphi olunamalungiselelo amancinci kakhulu. Kwaye nangona kuyinyani ukuba ayinabuchwephesha kwezobuchwephesha, ke kwezi ndlela zokupheka apho umahluko ubonakala kakhulu xa usebenzisa imveliso elungileyo.
Sukuwajongela phantsi amandla ezithako ezisemgangathweni, jonga isalmon elungileyo kwaye ngaphezu kwako konke ukhethe ibhatata elungileyo kwaye ngokuqinisekileyo uya kuwenza umohluko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izitya » Isaladi » Isaladi yamazambane kunye nesalmon, iapile kunye netshizi